बटरफ्लाईमा विभिन्न रङ्गहरु छन् – निर्देशक ओम प्रतिक::Milap News
निर्देशक ओम प्रतिक गुरुङ बहुप्रतिभाशालि व्यक्ति मानिन्छन् नेपाली सिने क्षेत्रमा । चलचित्र तथा टेलिचलचित्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका निर्देशक प्रतिकले ‘तिम्रो माया ९९ मेरो माया १००’, ‘फर्कि आउ’, ‘यो कथा हो तिम्रो मेरो’ जस्ता चलचित्र निर्देशन गरिसकेका छन् भने चलचित्र बटरफ्लाई यही पौष २८ शुक्रबारदेखि नेपालभरका सिनेमाघरमा आउँदै छ । एक कुशल चित्रकार पनि रहेका उनको छिट्टै उपन्यास ‘वदनाम बस्ती’ पनि पाठकमाझ आउँदै छ । उनै ओम प्रतिक गुरुङ गीता अधिकारीसँग यसो भन्छन् :-
चलचित्र ‘बटरफ्लाई’ सिनेमाघरमा आउने दिन नजिकिदै छ, के हुँदै छ यतिवेला ?
चलचित्रका बारेमा आम दर्शकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले विभिन्न क्रियाकलाप भइरहेका छन् ।
कस्तो पाइरहनु भएको छ प्रतिक्रिया ?
हामीले सार्वजनिक गरेका चलचित्रका गीत र प्रोमोलाई दर्शकले एकदमै रुचाएका छन् । यसबाट हामी केही उत्साहित पनि भएका छौ तर यसैलाई लिएर धेरै एक्साइटेड पनि म भएको छ । किनभने धेरै एक्साइटेड पनि हुनु हुँदैन भन्छन । तर, पनि के हो भने गीत र प्रोमोलाई दर्शकले एकदमै मन पराइदिनु भएको छ । भरखर सार्वजनिक गरेको चलचित्रको टाइटल सङ्गले पनि अझ हाइट लिएको छ ।
‘बटरफ्लाई’ नाम नै किन रोज्नु भयो ?
‘बटरफ्लाई’ आफैँमा एउटा मायालु शब्द हो । ‘बटरफ्लाई’ भन्दा वितिकै मायाका कुराहरु पनि आउँछन् । ‘बटरफ्लाई’ विभिन्न रङ्गहरु हुन्छन् । ‘बटरफ्लाई’ एक प्रकारको एग्रेसिभ रुप पनि हो फेरि, यसमा मायालु मात्र आउँदैन । ‘बटरफ्लाई’ खास अर्थ चलचित्र हेरिसकेपछि सम्पूर्ण दर्शकले बुझ्नुहुने छ ‘बटरफ्लाई’ टाइटल किन राख्यो भनेर ।
‘बटरफ्लाई’ कस्तो चलचित्र हो ?
यहि पौष २८ बाट दर्शकमाझ आउने तयारीमा रहेको चलचित्र ‘बटरफ्लाई’ कस्तो चलचित्र हो भन्ने प्रश्नका लागि चलचित्र हेरिसकेपछि नै थाह हुन्छ । हामीले एउटा राम्रो नेपाली चलचित्र बनाउने प्रयास गरेका छौ । चलचित्रमा आर्यन अधिकारी र प्रियंका कार्कीसँगै अर्पण थापा, रविन्द्र खड्का, पुरज थापा, सुष्मा कार्की, सुरविर पण्डित, मोहन निरौंला, राम बुढाथोकी र माधव पण्डित लिड रोलमा हुनुहुन्छ । चलचित्रमा विकास चौधरीसँगै अर्जुन पोखरेल र दीपक शर्माको सङ्गीत रहेको छ ।
सुरेश बज्राचार्यले खिचेको चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रमेश प्रजापति हुन्हुन्छ भने सरोज शाह र मन्दिल श्रेष्ठ सह निर्माता रहनुभएको छ । चलचित्रमा मुख्य निर्मातामा पुष्पाञ्जली अधिकारी ‘सखा’, रामशरण राना र भुपेन्द्र सुवेदी हुनुहुन्छ । अर्जुन जिसी र मन्दिल श्रेष्ठले चलचित्र सम्पादनको काम गरेका छन् ।
कातिको आशावादी हुनुहुन्छ चलचित्रले व्यवसायिक सफलता प्राप्त गर्नेमा ?
यो चलचित्रले नेपाली सिनेमामा एउटा थप आयाम ल्याउने छ भन्ने मैले सोचेको छु । ‘बटरफ्लाई’लाई एउटा सिम्बलको रुपमा प्रयोग गरिएको छ सिनेमामा । त्यो कथा वस्तुसँग कतिको म्याच छ भन्ने कुरा चाहिँ चलचित्र हेरे पछि थाहा हुन्छ । मैले जति पनि चलचित्र बनाए तिनका टाइटल राख्दा खेरी हावातालमा राखेको छैन् त्यसले सिनेमामा पुष्टि गरेको छु । चाहे त्यो मैले सिनेमा लेखे वा स्क्रिप्ट राइटिङमा टाइटल राखे सबैमा मैले कथा वस्तुलाई पुष्टि हुने खालको नै राखेको छु । यो चलचित्रमा मैले निर्मातामा नाम न राखे पनि निर्माणमा मेरो पनि लगानी छ हामी आशावादी छौ किनभने हामी सबैको मिहिनेतले एउटा राम्रो नेपाली चलचित्र बनेको छ ।
तपाईंको यस अघिको चलचित्र ‘यो माया हो तिम्रो मेरो’ले व्यवसायिक सफलता पाउँन सकेनन् नि ?
हो, तपाईंले भने जस्तै मेरो यस भन्दा अघिको चलचित्रले हामीले सोचे अनुरुप सफलता पाउँन सकेन । यो चलचित्र ‘बटरफ्लाई’ले हामीलाई व्यवसायिक सफलता दिलाउँछ भन्नेमा हामी आशावादी छौ । यसका हामीले सार्वजनिक गरेका सामाग्रीले पनि हामीलाई थप आशावादी बनाइदिएको छ । यो चलचित्रलाई लिएर यतिवेला जाडोको मौसम भए पनि बजार तातेको हामीले पाएका छौ ।
लामो समयदेखि नेपाली सिनेमाक्षेत्रमा हुनुहुन्छ । थुप्रै सिनेमाका स्क्रिप्ट पनि लेख्नु भयो कतिपयको के भनाई छ भने नेपाली सिनेमाको स्क्रिप्ट लेखाई नै कमजोर छ के यस्तै हो ?
जसले यसो भन्नुहुन्छ मलाई के लाग्छ भने उहाँहरुले त्यस्तै प्रकारका चलचित्र हेर्नुभयो होला जसमा स्क्रिप्ट कमजोर छ । त्यस्तो होइन पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्रको स्क्रिप्ट लेखन धेरै राम्रो हुँदै गएको छ । फेरि सिनेमा नबुझेकाले पनि यस्तो कुरा गर्छन । अर्को कुरा के हो भने स्क्रिप्टले मात्रै सिनेमा राम्रो बन्ने पनि त होइन । तपाई स्क्रिप्ट पढदा धुरु धुरु रुनुहुन्छ, कुनै उपन्यास पढदा रुनुहुन्छ तर त्यसलाई पर्दामा उतारदो मनलाई न छुन पनि सक्छ । मनलाई छोएन भने आखाँबाट आशु आउँदैन । कस्तो टाइपको स्क्रिप्टलाई कसरी निर्देशन गर्ने अर्थात कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । त्यसमा भर पर्छ । हाम्रा बजेटका कुराहरु पनि छन् । स्क्रिप्टमा धेरै ठाउँ समेटनुपर्ने, हेलिक्पटरलगायतका अन्य प्रोपरटी चाहिने भए पनि बजेटका कारणले त्यो सम्भव नभएको पनि हुन्छ । जसले गर्दा पटकथा कमजोर पर्न जान्छ । कमजोरी पनि नभएको होइन कतिपय यस्ता स्त्रिप्ट राईटर पनि छन् जसले हिन्दी सिनेमा ट्याक्क उठाएर पनि गर्छन् । कतिपय निर्माता फेरि त्यस्तै छन् भन्छन् कि यस्तै स्क्रिप्ट चाहियो भनेर ।
कुनै समयमा नेपाली टेलिभिजनमा ओम प्रतिक को एकक्षत्र राज जस्तै थियो टेलि चलचित्रमा । ति दर्शकले फेरि टेलिभिजनको स्क्रिनमा ओम प्रतिकलाई देख्न पाउँलान ?
तत्काल मेरो त्यस्तो केही योजना त छैन । धेरै दर्शकले मलाई भेटदा उहाँहरुले तपाईंले सोधे जस्तै मलाई पनि सोध्नु हुन्छ कहिले देख्ने तपाईंलाई फेरि हाम्रो घरको टिभिमा भनेर । किन अभिनय गर्नु भएको छैन, किन सिरियल छोडनु भयो भनेर सोध्नुहुन्छ । कतिपय टेलिभिजनसँग कुरा पनि भएको छ तर, मलै जुन क्वालीटी खोज्छु त्यसमा कुरा मिल्न सक्दैन र भइराको छैन । लामो समय टेलिभिजनमा काम गरेको मैले पनि यो क्षेत्रलाई मिस गरिरहेको जस्तो लाग्छ । एक पछि अर्को चलचित्रमा छु मलाई चलचित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ दर्शकले । ‘बटरफ्लाइ’मा पनि छु ।
एउटा राम्रो सिनेमा, एउटा पूर्ण सिनेमाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो जस्तो लाग्छ ?
मैले नेपालमा देखेको चाहिँ अवार्डहरु दिइन्छ राम्रो भनेर । व्यवसायिक रुपमा सफल भएका चलचित्रले नै प्रायः अवार्ड पाएका हुन्छन् । मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन । केही वर्ष निर्णयक भएर पनि अवार्डमा काम गरे । मेरो चलचित्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण केही फरक छ । व्यवसायिक सफल चलचित्र मात्रै राम्रो चलचित्र हो भन्ने होइन अन्य कतिपय राम्रा चलचित्रले पनि व्यवसायिक सफलता प्राप्त गर्न नसकेका हुन सक्छन् । व्यवसायिक सफल नभएको चलचित्र पनि उत्कृष्ट चलचित्र हुन सक्छ ।
तपाईंको उपन्यास ‘वदनाम बस्ती’ पनि चाडै बजारमा आउँदै छ, कहिले पढन पाउँछन् पाठकले ?
रत्नपुस्तक भण्डारले प्राकाशन गर्दै छ । ‘वदनाम बस्ती’ प्रेसमा छ यतिवेला । छपाईंको काम भइरहेको छ ।
यहाँ पूर्ण रुपमा नेपाली कला क्षेत्रमा समर्पित मान्छे नढाटिकन भन्नु पर्दा यो क्षेत्रमा पूर्णकालिन भएर जिविकोपार्जन गर्न कतिको कठिन छ ?
राम्रोसँग चलेकालाई राम्रै छ नचलेकालाई गाह्रो छ । मेरो कुरा गर्नुपर्दा नेपाली कलक्षेत्र बाहेक मेरो अन्य कुनै काम छैन । कतिपयले जग्गालगायत अन्य कारोबार पनि गरिरहेको पाइन्छ । मैले यो क्षेत्रबाहेक अरु केही सोचिन । मलाई पारिवारिक सर्पोट छ ।
रोल्पाबाट काठामाडौं आउनुभयो, तपाईंको जन्म स्थान रोल्पा, अहिले फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ ?
म अध्यायनको सिलसिलामा भारतमा बसे लामो समय । सिनेमा क्षेत्रमा रुची थियो । नाटकहरु गरे । थिएटरहरुमा आफूलाई लामो समय खर्चिए । १९८९मा अल इण्डिया नाट्य कम्पिटिसनमा राम्रो नाटक, राम्रो एक्टरको उपाधि पनि चुमे । बुबाको एउटै कुरा के थियो भने त जेठो छोरा त जुन लाइनमा लागेको छस यो बाट म सन्तुषट छैन । एउटा जागिर खानु पर्छ घर परिवार सम्हाल्नु पर्छ भन्ने थियो उहाँको । तर, मेरो रुची यता थियो । पछि बुबाले के भन्नु भयो भने त्यैले यो लाइन न छोडने हो भने आफ्नै देशमा गएर गर । मलाई बुबाको कुरा ठिकै लाग्यो आए रोल्पा दुई वर्ष जति त्यहाँ बसेर नाटकहरु गरे । रोल्पा जस्तो ठाउँमा पनि । पछि काठमाडौंमा आए यहाँ आएर थुप्रै संघर्ष गरियो । म मुम्बई जस्तै सोचे तर फरक रहेछ । बीचमा केही डिपेरसन जस्तो पनि भयो तर म आफूलाई मल्टी ट्यालेन्ट भन्छु त्यसैले सबैतिर गर्दा गदै राम्रो हुँदै गयो ।
पुष २८ गते अल नेपाल चलचित्र ‘बटरफ्लाई’ आउँदै छ । एउटा राम्रो नेपाली चलचित्र बनेको छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु ।